မောင်ဒိုင်း၏ သရော်စာများ: ရုရှသွား..ပါးလိုက်တဲ့စာခွေ
အမိမြန်မာ၊ ဘွဲ့ရတာ ၇၅
၁၀ ယောက်က ကျိုးကန်း
၅ ယောက်က ရူးနှမ်းနှမ်းနဲ့
ရဲဖမ်းတာ ၇ ယောက်
၃ ယောက်က လူကြီးအမျိုး
ကံဆိုးသူ အယောက် ၅၀ (ငါတို့ကျောင်းမှာ လူ ၅၀ ရှိလို့)
Issue နဲ့ စားသောက်နေရပေမယ့်
ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကိုင်ပြီးကတည်းက
လယ်သမားကြီး အယောက် လေးဆယ်
တချောက်ချောက်နဲ့ Keyboard ရိုက်သံ
ကြိုးစားမှုတွေ မှန်နေတယ် မထင်နဲ့
Chatroom တွေ လိုက်မေးပြီး
လေ့လာဖြစ်တာ all ကား
လှတဲ့ အိုး၊ ဖြိုးတဲ့တင်
ဟင်း…၊ ..... လိုက်ရ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့
အင်္ကျီကိုဆွဲချ၊ တင်ပါးဆို ဖုံးထားမှ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့။
လေ့လာတာ all ကား
သင်ချင်တာ Chat အကြောင်း
လိုချင်တော့ ၅ မှတ်
ဆရာမကို ဆီးကြို၊ အထုပ်ကို ခပ်သွက်သွက်နဲ့
ဆရာသင်တဲ့စာ၊ ဘာဆို ဘာမှမသိ
သြော်.. မြန်မာတွေတောင် တော်တော်များလာပြီပဲ။
၂၀၁၀ ရဲ့ တစ်နေ့
မြန်မာပြည်မြေပုံ အသစ်ဖြစ်ပြီ ထင်ပါရဲ့။ ။
from Ko Shar Shay
Posted by dms at 1:57 AM
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာ ဗျာ။ ထိချက်ကတော့ ရှယ်ပဲဗျို့ ။ မှတ်မိတာ မမှားဘူးဆိုရင် စက်ရုံတစ်ခုက မိုးကုတ်နားက သပိတ်ကျင်း(ကျောက်ကြီး) မှာဗျို့ ။ ကျောက်ဆည်နားက ဓါတ်တော်မှာက အခွံတွေပဲကျန်တော့တာ ကြာလှပေါ့ ။ ခုတော့ စူပါကွန်ပြူတာ ပရောဂျက် လုပ်နေတယ် ။ အရူးတွေရဲ့ နွေလည်အိမ်မက်ပေါ့ဗျာ ။
ဟဟ ကြိုက်တယ်ဗျာ။ တကယ်ကောင်းတယ်။
ဘယ်တော.ပြန်နိုးမလဲ ဗျို.။ ကိုမောင်ဒိုင်း။ ပြန်ထပါတော.လား။ ဆြာသမားရဲ.။
ဒါပေမဲ့ခေါင်းစဉ်လေး မှန်အောင်တော့ 
နော်ဝေ လူလှ said...
မဆိုးပါဘူး အရူးစာတွေက ဖတ်လို့တော့ကောင်းတယ် ဒါပေမယ့် တော်၂သနားဖို့ကောင်းတာပဲ ....ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူများမကောင်းကြောင်း ယောက်ကျားတန်မဲ့ . အရှက်မရှိလျောက်ရေး....ရေးတော့လဲ တစ်လွဲတွေချည်းပဲ မှန်တာတစ်ခှမှ မပါဘူး...
I do like this poem....
please go ahead... our freind
we are waiting for to read your news post,
လသာတာကိုခွေးဟောင်တော့ ..ခွေးမောတာပေါ့. မင်းအစ်မတွေ မင်းအမေတွေစောက်ဖုတ်တွေကို သူများအလိုးမခံရအောင် မင်အဖေတွေ.. အလုပ်လုပ်နေရတယ် မင်းစွမ်းနိုင်ရင် မင်း အစ်မတွေစောက်ဖုတ်ကို ...လုံအောင်ကင်းစောင့်ထား..စံစားတာကိုမမြင်နဲ့..အောက်ချေကိုကြည့် ခံစားနေရတာကိုလည်းသိဦး မင်းစွမ်းပါတယ်ဆို ရင် မင်းအမျိုးအကုန်လုံး ကင်းအောင်နေခိုင်း..မင်းနှမကစကုန်းနေရင်တော့လာမပြောနဲ့...မင်းသိထားဖို့က...လူဆိုတာကိုယ်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူများ အပြောမခံချင်နဲ့ မင်းအဖေတွေအကုန်လုံးလည်း ဒီထဲကပဲ စစ်သားဖြစ်သွားကြတာ မျှအောင်တွေးမျှအောင်ရေး...ဒိုင်းမလုပ်နဲ့..တစ်ချက်ဆိုသေတယ်....ငါပြောလိုက်မယ်...သတ္တိကောင်းရင်...လာခဲ့လိုက်.အကုန်ယှဉ်လို့ရတယ်...မင်း အမျိုးတွေ အဖုတ်တွေကိုလုံအောင် ဖုံးထား....
လမင်းကိုခွေးဟောင်လို့ ရွှေလရောင် ပြောင်မပျက်တယ် ထွန်းလျက်ပင်သာ တဲ့ သူငယ်ချင်း ကေသရာဇာ ခြေင်္သေ့ သည်းခြေဟာ သိဂီင်္ရွှေခွက် မှာတည် တယ် ကွ မထိုက်တန်ပဲနဲ့ ဘယ်နေရာမှာမှ မရဘူးသူငယ်ချင်း ဒါကို မစားရတဲ့အမည်းသဲနဲ့ပတ်သလို လုပ်နေကြတာ သိပ်ပြီးကြည့်မကောင်းလှဘူးကွာ
တော်တော်ပေါကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့ post တစ်ခုပါ။ post တင်တဲ့လူအနေနဲ့
စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်အသက်အရွယ်နဲ့ ဒီလောက် မပေါသင့်ပါဘူး။
Excellent!!!.Keep the good work bro..
မအေလိုး အခါတစ်သိန်းကွာမအေလိုး အခါတစ်သိန်းကွာမအေလိုး အခါတစ်သိန်းကွာ
ကဗျာက ကောင်းပါတယ်... ခက်တာက သူများတွေလို ကဗျာတွေ စာတွေနဲ့ ပြန်မရေး၊ ပြန်မပြောနိုင်ကြတဲ့ စစ်သားငပေါလေးတွေက Comment တွေထဲမှာ ဆဲချည်းပဲ ဆဲနေတာပဲဗျို့....
An old lousy folk and his monkey grandson attempt to destroy our motherland everyday.. However some dumb is biting bones and still wish to support them.. Shit!!!! Go and su*k wardogs!!!